Dewersiga Puntland Iyo Somaliland
Buur-Dhaab, 20 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Xog rasmi ah oo laga soo xigtay dadka iyagu u dhuundaloola siyaadada Somalia, ayaa sheegaya in mashaariicda ugu waaweyn ee qaadhaan bixiyayaashu siiyaan Maamulada Somaliland iyo Puntland ay ugu waaweyn yihiin kuwan hoos ku qoran.
Maamulka Puntland ayaa xogtani daboolka ka qaadaysaa in marka dhaqaalahu yaraado, ay weerar joogto ah ku qaadaan Buuraleyda Maakhir, iyagoo isla markaana baro kicinaaya dadka degan, mashruucan oo la yiraahdo Busaarad La Dirir ayaa aad waxa uga faa'idaysta xukuumada Puntland iyadoo Aduunweynaha ka dhaadhicisa in Buuraleyda Maakhir ay ku jiraan Malaayiin Muslimiinta mayalka adag ahi.
Dhanka kale Xukuumada Somaliland lafteeda ayaa iyaduna soo qufta Xabaalo wadareedyo ay sheegaan in Taliskii Siyaad Bare xasuuqay dad rayid ah isla markaana Xabaalahan ka buuxiyey.
Dad badan oo u dhashay Somaliland ayaa aaminsan in arintani tahay mashruuc been ah oo aduunka lagu baryo, Xabaalahanina yihiin dadkii ku dhintay dagaaladii Maryo Aloolka ee qabiilooyinka Isaaqa ka dhacay horaantii Sagaashanaadkii.
Si kastaba ha aahaatee tan iyo markii dowladii dhexe burburtay, ayaa waxaa soo ifbaxaaya in meelo aan Irsaaqad loo doonan jirin hada ay noqdaan dakhliyada ugu waaweyn ee Somalidu ku qadhaabato.